Just In:Ra'isalwasaare Stoltenberg oo TV-ga ka soo muuqdey & dhimashada oo korortey – SBC
Just In:Ra'isalwasaare Stoltenberg oo TV-ga ka soo muuqdey & dhimashada oo korortey
Ra’isalwasaaraha Norway Jens Stoltenberg & wasiirkiisa cadaalada ayaa shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen waxay ku sheegeen in weerarkii qarax ee ka dhacay magaalada Oslo in ay ku dhinteen 7 qof isla markaana 10 kale oo dhaawac halis ah qaba ay ku dhaawacmeen, waxay kaloo sheegeen in weerarkii ka dhacay Jasiirada Utoya ay ku dhinteen ugu yaraan 10 qof.
Ra’isalwasaare Jens Stoltenberg wuxuu sheegay in Norway loo soo weeraray sida hadalka uu u dhigay dimuqraadiyada ay aaminsan tahay waxaana uu sheegay in cadaalada la horkeeni doono kuwii ka dambeeyey weerarkaasi, waxaana uu sheegay in uu socdo baaritaan.
Wasiirka cadaalada & booliiska Knut Storberget wuxuu sheegay in weerarkii toogashada ahaa ee ka dhacay Jasiirada Utoya loo qabtey nin asalkiisu yahay Norway mana sheegin faahfaahin kale oo dheeraad ah.
Qof goob jooge ah ayaa u sheegay Telefishinka NRK ee laga leeyahay wadanka Norway in toogashada ka dhacdey jasiirada Utoya uu indhihiisa ku arkay 20 ilaa 30 qof oo meyd ah, waxaana uu sheegay in dadka qaar ay badda isku tuureen si ay uga baxsadaan rasaasta.
Warar ayaa sheegaya in ciidamada Booliisku ay dhaawaceen ninkii toogashada geystey isla markaana ay qabteen, waxaa la sheegay in uu ku labisnaa dharka ciidamada Booliiska isagoo sidoo kale watey jaakadaha xabada celiya.
Booliisku waxay sheegeen inay aamisan yihiin in ay xiriir leeyihiin weerarka toogashada ah ee ka dhacay Jasiirada Utoya & qaraxa ka dhacay magaalada Oslo.
Warar dheeraad ah la soco SBC.